"Ary ny Tompo niteny tamin’i Paoly tamin’ny fahitana nony alina ka nanao hoe : Aza matahotra, fa mitenena ihany, ka aza mangina ; fa Izaho momba anao, ary tsy hisy olona hihazona anao hanisy ratsy anao ; fa manana olona maro amin’ity tanàna ity Aho."Asan’ny Apostoly 18:9-10
"Be ny vokatra, fa ny mpiasa no vitsy."Matio 9:37
“Aza matahotra”… Olon’Andriamanitra maro ao amin’ny Baiboly no nahazo io teny fampaherezana io. Fantatry ny Tompo fa manambana ireo vavolombelony ny fanafihan’i Satana, ary tsy alefany hanao ny asany isika, raha tsy omeny toky.
“Mitenena ihany, ka aza mangina”… Raha tsy miteny momba an’i Jesosy Kristy Mpamonjy antsika isika, iza no hanao izany? Feno feo mandainga maneho lalan-diso amin’ny olona ity tontolo ity. Aoka isika hanana fitiavana toy ny an’Ilay Andriamanitra, “Izay tia ny olona rehetra hovonjena” (1 Timoty 2:4).
“Izaho momba anao”… Teny toy izany no nolazain’Andriamanitra ny mpaminany Jeremia, izay natahotra ny hanambara ny hafatra nanomanan’Andriamanitra azy (Jeremia 1:8). Izany koa no teny farany nolazain’i Jesosy tamin’ny mpianany, ao amin’ny Filazantsara araka an’i Matio: “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 28:20).
“Tsy hisy olona hihazona anao”… Manome antoka antsika Andriamanitra fa hiaro antsika. Tsy hisy na inona na inona hitranga, raha tsy avelany. Mety hisy loza na aretina hiseho, kanefa eo am-pelatanany ny zava-drehetra. Matoa Izy miantso antsika hody any aminy, dia satria vita ny anjarantsika ao amin’ny asany.
“Manana olona maro amin’ity tanàna ity Aho.” Aoka isika hanana ny fijerin’Ilay Andriamanitra, Izay mahita tontolo kristiana midadasika lavitra noho ny fijerintsika azy. Ary aoka hiezaka ho mpiasa mahatoky ao anatin’izany asa fijinjana lehibe izany!